Hakanto Contemporary : Une vingtaine d’artistes mis en avant dans « Ny fitiavanay » - ewa.mg
News - Hakanto Contemporary : Une vingtaine d’artistes mis en avant dans « Ny fitiavanay »
L’article Hakanto Contemporary : Une vingtaine d’artistes mis en avant dans « Ny fitiavanay » est apparu en premier sur Midi Madagasikara.
L’article Hakanto Contemporary : Une vingtaine d’artistes mis en avant dans « Ny fitiavanay » a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra – Fifanintsanana ny “Can 2022”: “Expatriés” enina tsy ho afaka hanatevina ny Barea
Mandalo fotoan-tsarotra ny Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao. Raha noheverina fa ho feno ireo mpilalao avy any ivelany, fantatra izao fa tsy ho avy hiatrika an’i Etiopia ny enina amin’izy ireo.Tsy maintsy novaina ny lisitry ny Barea de Madagascar, hiatrika ny lalao amin’i Etiopia, ny alarobia 24 marsa ho avy izao. Araka ny fantatra mantsy, mpilalao mila ravinahitra enina fito ny tsy ho afaka hanatevina ny ekipam-pirenena, amin’io fihaonana io. Anisan’ireny Ilahimaritra Marco, mpilalaon’ny Charleroi Belzika, voan’ny Covid-19, taorian’ny fitiliana natao azy, ny alarobia lasa teo.Ankoatra azy, tsy mahazo mivoaka ny faritra misy azy kosa i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea milalao any amin’ny Ludogorets, Bolgaria, sy ireo avy ao Frantsa, ka tena voakasika ireo mpilalao ao amin’ny “Ligue 1”, toa an’i Jeremy Morel (FC Lorient), sy Randriamamy Mathyas (PSG) ary ireo ao amin’ny “Ligue 2” misy an’i Jérome Mombris (Grenoble) sy Raveloson Rayan (Estac Troyes).Manoloana ireo tsy fahafahan-dry zalahy ireo, tsy maintsy nitodika aty amin’ireo mpilalao avy eto an-toerana ny mason’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, ka araka ny vaovao voaray, nantsoina hanatevina ny ekipa i François, avy amin’ny Five FC, sy i Naina (Cosfa). Eo koa i Toavina (Debakely), mpilalaon’ny IC de Croix, Frantsa, ary i Mamy Gervais ao amin’ny JS St Pierre La Réunion. Izy mirahalahy ireo izay samy efa nanatevina ny Barea de Madagascar ihany nandritra ny “Can 2019”, notanterahina tany Egypta.Mbola mipetraka ihany koa ny ahiahy ho an’ireo mpilalao any Azia, misy an-dry Carolus sy i Ibrahim Amada, izay tsy mbola nametrahan’ny kliobany fepetra aloha, hatreto. TompondakaL’article Kitra – Fifanintsanana ny “Can 2022”: “Expatriés” enina tsy ho afaka hanatevina ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
WeLight any ambanivohitra : tokantrano 2 000 izao mahazo famatsiana herinaratra
Tokantrano miisa 1 000, ny volana marsa tamin’ity taona ity, nahazo famatsiana herinaratra avy amin’ny WeLight, ary tafakatra 2 000 izany ankehitriny. Olona 10 000 ny mahazo tombony any ambanivohitra, noho ny ezaka ataon’ity orinasa tsy miankina ity, mpamatsy herinaratra any ambanivohitra. Mora, madio, maharitra sy azo havaozina ny angovo voka­riny, mampisy fiovana betsaka eo amin’ny toekarena sy ny sosialy any ambanivohitra. Tsapan’ity orinasa vahiny ity fa marefo ny fihariana any ambanivohitra ka anisan’ny mampatanjaka izany ny famatsiana herinaratra, manampy ny mponina amin’ny fivelomany eo amin’ny fambolena sy ny fiompiana, ny asa tanana, ny fampiasana milina samihafa hampivelatra ny indostria ma­dinika. Manampy amin’ny fampandrosoana maharitra any ambanivohitra ny WeLight. Manampy betsaka ihany koa ny asam-panjakana any ambanivohitra, mampisy fi­fandraisana tsy tapaka amin’ ny sampandraharaha isan-karazany. Naneho ny fahafaham-pony ny 72 % amin’ireo vehivavy. « Taloha aho, nandany ora efatra mandeha mitady gazoala miampy saran-dalana 8 000 Ar, ankehitriny, tsy izany intsony ny iainako, afaka mampitombo betsaka ny asako aho », hoy Raholiari­malala Emma Claudine, tantsaha any Fialofa. Fiaraha-miombona antoka ny vondrona Axian, ny Sagem­com, ary ny Norfund ny We­Light, atao indrindra ho mpamatsy herinaratra aty atsimon’ i Afrika. Miasa amina sehatra maro ny vondrona Axian eto Madagasikara, toy ny fifandraisan-davitra, ny fanaovan-trano, ny famatsiana angovo. Ao anatin’ny Sagemcom, in­dostria frantsay, ny Welight. Ny Norfund kosa, Tahiry norvezianina ho fanampiana ny sehatra tsy miankina amin’ny tany mahantra. Manana tahiry 2,6 miliara dolara ny Norfund, ampiasana ho an’ny famoka­rana angovo, ny famatsiam-bola, ny fotodrafitrasa sy ny indostria isan-karazany.R.MathieuL’article WeLight any ambanivohitra : tokantrano 2 000 izao mahazo famatsiana herinaratra a été récupéré chez Newsmada.
No Doze: hiaka-tsehatra ny Mad’in voyage sy i Sandrine Rajaofetra
Hafana ny faran’ny herinandro… Fampisehoana maimaim-poana indray no hotanterahin’ny Mad’in Voyage sy i Sandrine Rajaofetra etsy amin’ny No Doze by TranoBongo Tanjombato, rahampitso zoma 26 marsa, manomboka amin’ny 8 ora alina. Mpanakanto anisan’ny sangany sy manana ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny mozika sy ny fitendrena zavamaneno izy ireo, izay ahitana an-dry Harty, Tsanta, Sandrine, miantsa ary i Bolo.Sandrine Rajaofetra amin’ilay feo jazz anisan’ny tena mampiavaka azy eo amin’ny tonotolon’ny mozika. Efa maro ny sehatra nanehoany ny talentany, raha tsy hilaza afa-tsy ny « Mozika Tsotra izao”, izay notanterahina tetsy amin’ny La City Ivandry, ny faramparan’ny volana febroary tamin’ny taon-dasa.Efa maro koa ny fiarahana teo amin’ny Mad’in Voyage sy i Sandrine Rajaofetra, toy ny faha 31-n’ny Madajazzcar Festival. Anisan’ny manome sehatra ny mpanakanto hatrany ary mampihaona amin’ny mpankafy azy ny etsy amin’ny No Doze. Ao anatin’ity fampisehoana ity dia mila hajaina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana mba tsy hiparitahan’ny valanaretina coronavirus.NarilalaL’article No Doze: hiaka-tsehatra ny Mad’in voyage sy i Sandrine Rajaofetra a été récupéré chez Newsmada.
Toamasina : nahazo fitaovana ny holafitry ny mpisolovava
Notoloran’ny Vondrona iraisam-pirenena miteny frantsay (OIF) fitaovana informatika raitra, toy ny solosaina, «ondulaire», «imprimante», miaraka amin’ny « connexion internet », sy rindram-baiko « logiciel » mirakitra ny lalàna rehetra ny mpisolovava eo anivon’ny fitsarana. Anisan’ny nisitraka izany, ny herinandro teo, ny eto Toamasina, Ambatondrazaka, Moramanga, Fenoarivo Atsinanana ary Maroantsetra. Ahitana fampiofanana ahafahan’ny mpisolovava maharaka tsara ny fiovan’ny lalàna misy eto amin’ny firenena izany ary hanamora ny asa fiarovany ny mpanjifany sy hifanaraka koa amin’ny fanjakana tsara tantana sy ny fitsarana miady amin’ny kolikoly izany. Nitarika izany ny filoha nasionalin’ny holafitry ny mpisolovava, Razafinarivo Chantal sy ny avy amin’ny sampana Toamasina, Rabenjarijaona Antonio. Nambaran’ny mpanolotra fa fitaovana informatika avo lenta izao natolotra izao. Eo koa ny bokikely misy ny tsara ho fantatra sy anaran’ny mpisolovava rehetra manerana ny Nosy, hisorohana ny mety fisandohana. “Ireo sampana holafitra manana birao foibe ihany no afaka tolorana fitaovana raitra toy izao mba hanamora ny asan’ny birao sy ny mpikambana anivon’ny holafitra”, hoy ihany izy.Sajo L’article Toamasina : nahazo fitaovana ny holafitry ny mpisolovava a été récupéré chez Newsmada.
Nitondra avo ny mozika malagasy: nodimandry i Monja Manitsindava
Mpiangaly ny valiha marovany sy ny lokanga. Mpamoron-kira sy tompon’ny beko androy ary mpandihy ihany koa. Olona tsotra, tia mizara ny zavakanto i Monja Manitsindava. Vaovao ratsy ho an’ny tontolon’ny mozika ny fahalasanany.“Izahay Fikambanagne Sairy le magnambara anareo aby fanagnandrae, fanagnandrene , zoke, zay, raeamandrene, olobe aby fa nivilasy anito ty zokebey raeamadrene ay Monja Manitsindava. Malahelo zahay fa nengan-joke, malahelo fa nengan-Draeamandrene… ». Io ny ampahan’ny fanambarana nataon’ny fikambanana Sairy, mahakasika ny fahalasanan’i Monja Manitsindava. “Taorian’ny fianjerana izay nahazo azy, ny fiandohan’ny volana janoary teo, namonjy mpanotra tany Ambondromamy izy. Mbola niresaka tamin’ny vadiny izy, ny asabotsy sy ny alahady maraina fa ny alina kosa no nindaosin’ny fahafatesana”, hoy ny fanampim-panazavana avy amin’ny fikambanana Sairy hatrany. Lavo ny andrarezina, nodimandry ilay nitondra avo ny kolontsaina, ny zavakanto, ny mozika malagasy maneran-tany. Nizara sy nampahafantatra hatrany ny beko sy ny karazan-kanto rehetra avy any androy i Monja Mahafay, na taiza na taiza toerana nalehany. Lehiben’ny tarika Manitsindava, kanefa efa niara-niasa tamina mpanakanto maro ihany koa izy nandritra izany. Nisokatra tamin’ny karazana mozika maro, kanefa nitana ny mampiavaka azy foana ity mpanakanto ity. Anisan’ny tetikasa nahitana azy faramparany ny tarika Gasy Efatra, niarahany tamin’i Rôla Gamana, Tiana Rainitelo ary i Do B. Nialoha izany, efa nisy koa ny Groove Power Project niarahany tamin’i Miary Lepiera sy i Fanja. Maro dia maro ny mpanakanto niara-niasa taminy na vahiny na malagasy. Maro tahaka izany koa ny hetsika iraisam-pirenena nandraisan’i Monja anjara. Sarotiny tamin’ny fomba amam-panao ary niezaka nijoro ho mpiaro sy mpampihavana ny Malagasy i Monja Manitsindava. Nitarika ny fikambnana Arofototse izy tamin’izany ary efa namoaka ny boky “Arofototse” ihany koa. Izy no tompon’antoka tamin’ny hetsika “Tea longo”, nirona indrindra tamin’izay fampihavanana ny samy Malagasy izay…Miraradraraka ny fanomezam-boninahitra“Ny kantonao mbola hanakoako eran-tany hatrany hatrany, ireo mpitia sy tena mahalala mozika, matoky sy mino an’izany…”, hoy ny fanomezam-boninahitra nataon’i Fanja Andriamanantena ho an’i Monja Manitsindava. Iray tamin’ireo mpanakantomaro namany sy niara-niasa tamin’i Monja, naneho ny alahelo sy nizara ny fahatsiarovana tsara rehetra niarahana taminy izy. Fantatra fa an-dalana miakatra aty Antananarivo ny vatana mangatsiakan’i Monja Manitsindava, ka homena eo ihany ny tohin’ny fandaharam-potoana.Nangonin’i Zo ny AinaL’article Nitondra avo ny mozika malagasy: nodimandry i Monja Manitsindava a été récupéré chez Newsmada.
Nécrologie du 28 juillet 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 28 juillet 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.